6 Izakhiwo Ezidumile Ezingasetshenziswa Kunoma Iliphi Igumbi Lokugeza Kusukela Ku-3-9m2. Lapho Omakhelwane Bebuka, Bonke Bafuna Ukudiliza Udonga Baphinde Bafake! - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Blog / Izakhiwo Ezi-6 Ezidumile Ezingasetshenziswa kunoma iyiphi indawo yokugezela Kusukela ngo-3-9m2. Lapho Omakhelwane Babheka, Bonke Bafuna Ukudiliza Udonga Babuye Bafake!
Izakhiwo Ezi-6 Ezidumile Ezingasetshenziswa kunoma iyiphi indawo yokugezela Kusukela ngo-3-9m2. Lapho Omakhelwane Babheka, Bonke Bafuna Ukudiliza Udonga Babuye Bafake!
2021 / 09 / 20 UkwahlukanisaBlog 3337 0
Izihloko zezindaba ze-Bathroom Network entsha
"Indlu yokugezela incane kakhulu" ikhanda langempela. Uma ufuna ukubeka indlu yangasese, ize, isibuko se-curtain mirror, umgqugquzeli wekhoneni, i-rack rack, njll. Efakwe ngaphakathi, udinga amamitha ayi-10 square ukuze uzizwe ukhululekile! Kodwa-ke, ku- "Residential Building Design Code" yethu, indawo encane yokwakhiwa kwendlu yangasese ingu-2.5㎡ kuphela, engakwazi ukuhlangabezana nazo zonke izidingo. Namuhla, ngethula ukwakheka kokuhlelwa kwendlu yangasese kusukela ekuhlukanisweni kokumanzi nokomile, ukusetshenziswa, ubumfihlo nemikhuba yokuphila. Indlu yokugezela encane nayo ingasetshenziswa njengamamitha-skwele ayi-10!
Ukuhlelwa kwamamitha ayisikwele ama-3
Abantu abafaka isicelo: imibhangqwana emincane noma izikhulu ezingashadile
Uhlobo lwasekhaya olusebenzayo: ifulethi elilodwa noma igumbi elilodwa 1 ihholo
① Isiqephu esisodwa ngohlobo
Ngalolu hlobo lwesikhala "esihlangene", indawo incane ngokwanele ukuthi inganela amagugu amathathu: indishi yokugeza, ishawa nendlu yangasese. Lapha, ungasebenzisa isinki elengayo nendlu yangasese. Lokhu kuzoba ukonga isikhala. Zama ukugxilisa okokugeza endaweni eyodwa. Lokhu ngeke nje kuthuthukise ukusebenza kahle kokusebenzisa indawo yokugezela, kepha futhi kungaba kuhle kakhulu.
Njengoba uhlala wedwa, asikho isidingo sokugcizelela ngokweqile ubumfihlo. Kumele beka phambili ukwaneliseka kwemikhuba yokuphila yomnikazi futhi wehlise imigqa engadingekile yemisebenzi yokuphila. Kungcono ukwazi ukuxazulula endaweni eyodwa. Ungakwazi ukuklama umcengezi, itafula, nendawo yokugcina izinto ngcezu olulodwa ukonga isikhala nokuhlangabezana nezidingo zokugcina ngasikhathi sinye.
Endabeni yezindlu zokugezela ezincane, imikhiqizo yokugezela ifakwe odongeni ngangokunokwenzeka. Ufuna ukunciphisa ukunqwabelana kwemfuhlumfuhlu yaphansi ukwenza indlu yangasese ihlanzeke kakhudlwana. Imishanelo, izimbumbulu, amabhodwe nezinye izigaba zamathuluzi nazo zingahlanganiswa endaweni eyodwa ngehuku elifanele.
Ungakwazi futhi ukungcwaba ngaphambi kwesikhathi ishawa yemvula ephezulu kusengaphambili ukonga indawo yesikhala ehlala ekhanda leshawa.
Type Uhlobo olumanzi nolomile lokwehlukanisa
Uma igumbi lokugezela lide futhi lincane, igumbi lokugeza lizothatha isikhala esiningi. Kungcono ukuhlela indlu yokugezela ngokuhambisana nokusetshenziswa okujwayelekile kolayini wokugezela, kusuka emnyango kuya ngaphakathi, ukuze itafula lokuwasha izingubo, indawo yokuwasha, indlu yangasese, indawo yokugeza. Indawo yokugeza ingenza kalula hlukaniswa ngekhethini lokugeza, ukuze kusetshenziswe yonke intshi onqenqemeni lommese!
Lolu hlobo lwendawo encane yokuwasha idinga naka ukufakwa nokuthengwa kwemishini. Uma indawo yokugezela incane, kulula ukukhiqiza umuzwa wengcindezelo, ikakhulukazi ulenga i-heater enkulu yamanzi, kuhlale kunenkohliso yekhanda ophahleni.
Ungacabanga ngokufihliwe noma okufihliwe kancane ophahleni oluhlanganisiwe ukunciphisa ukuhlala esikhaleni esiphezulu. (Kepha kunobungozi - ukugcinwa kwesikhathi esizayo kuzoba yinkinga enkulu, ngakho-ke ukukhethwa kwesifudumezi samanzi kungabheka umthamo omncane wokushisa ngokushesha.)
Ukuhlelwa kwamamitha ayisikwele ama-4
Abantu abafaka isicelo: Umndeni wabathathu
Uhlobo lwasekhaya olusebenzayo: Isikwele esingu-50-60, amakamelo amabili okulala amancane
Type Uhlobo “olulodwa kokukodwa”
Isitayela esibizwa nge- "four-in-one" siyinhlanganisela ye- indawo yangasese, usinki, indlu yokugezela (ubhavu / ishawa) nomshini wokuwasha owodwa. Umsebenzi ngamunye unendima yawo ukukhulisa ukusetshenziswa kwendawo yokugezela. (Eminye imindeni idinga ukudela inani elithile lendawo yegumbi lokuhlola ukunweba indawo yokugezela ukuze izuze izitayela ezine.)
② "Izinhlobo ezintathu zohlobo olulodwa"
Indawo yokugezela yasekhaya ngokuvamile incane, imindeni eminingi izohambisa umshini wokuwasha uvulandi noma ikhishi. Ngale ndlela, "izingcezu ezine" ziba "izingcezu ezintathu", okuyilokho esikubiza ngokuthi "izitayela ezintathu".
Indawo yokuwasha ezimele, indawo yokugezela / indawo yokuwasha / indawo yangasese njengenye
Ukuhlelwa 1: Ithoyilethi liphakathi, futhi ishawa nesink kuhlangothi ngalunye. Sebenzisa izingcezu zengilazi ukuhlukanisa indlu yokugezela kwezinye izingxenye. Ngemuva kokushiya indawo yokugeza, yonke enye indawo inikezwa indlu yangasese, usinki kanye nesitoreji.
Ukuhlelwa 2: Isinki iseduze komnyango, futhi ishawa lihlelelwe indawo yangasese. Ipulatifomu yokuhlala ingaba lula kubantu asebekhulile abanezinkinga zomlenze ukuhlala nokugeza.
Indlu yokugezela izimele, nendawo yokuwasha / indawo yangasese / indawo yokuwasha ihlanganisiwe
Lo mklamo uvumela umuntu oyedwa ukuthi ageze ubuso futhi axubhe amazinyo ngenkathi abanye bekwazi ukuya endlini yangasese noma eshaweni. Uma ugeza, isibuko sendawo yokuwasha ngeke sikhiqize ukufingqa.
Indlu yangasese ehlukene, indlu yokugezela / isinki / ilondolo eyodwa
Ingavala iphunga egumbini langasese futhi iqinisekise umoya opholile kwezinye izindawo. Kumathoyilethi ahlakaniphile, asikho isidingo sokukhathazeka ngokuphepha kukagesi.
Isinki ehlukile, indlu yokugezela / indlu yangasese / ilondolo kukodwa
Isinki nayo ingacatshangelwa ngaphandle kwendlu yokugezela. Lokhu akugcini nje ngokubona ukwehlukaniswa kokumanzi nokomile, kepha futhi kuyabona ukuthi ukugeza izandla nokugeza kanye nokugeza akuphazamisani.
Ukuhlelwa kwamamitha ayisikwele ama-5
Abantu abafaka isicelo: Imindeni enezingane ezimbili
Uhlobo lwasekhaya olusebenzayo: Amamitha ayisikwele angama-70-80, amakamelo amabili nehholo elilodwa
Imindeni enezingane ezimbili ilungele ukusebenzisa izindishi eziphindwe kabili. Impilo yezingane ezimbili ingavunyelaniswa futhi ikhule ndawonye.
Uma kunezindlu zangasese ezimbili ohlotsheni lwendlu yoqobo, ungakha kanjani?
Izindlu zokugeza ezimbili zihlanganisiwe zaba yindlu yokugezela eyodwa
Uma izindlu zangasese zokuqala ezimbili zisondelene futhi azikho ezinkulu kakhulu, uma ugcina indlu yokugezela eyodwa, lapho-ke unga hlanganisa izindlu zangasese ezimbili ukunweba isikhala sokusetshenziswa. Ungavula iminyango emibili. Eyodwa ibheke ekamelweni lokulala eliphezulu enye ibheke ephaseji. Lokhu kulula kakhulu.
Sep Ukuhlukaniswa Okuthathu / Ukuhlukaniswa Okune
Indlu yokugezela inkulu ngemuva kokuyihlanganisa, ngakho-ke ingahlukaniswa kathathu ukwenza ngcono ukusebenza kwesikhala. Uma unesikhala esanele, ungangeza ubhavu noma igumbi lokuhlola bese ulakha igumbi elinezingxenye ezine.
Function Ukugqoka ithebula umsebenzi
Lapho kunesikhala esengeziwe, ungangeza futhi umsebenzi wokugqoka kuphawundi. Kulula kakhulu ukufaka izimonyo zokunakekelwa kwesikhumba ngapha ngemuva kokugeza.
Isakhiwo samamitha skwele ayi-6-9
Abantu abafaka isicelo: Izizukulwane ezintathu emndenini ofanayo
Uhlobo lwasekhaya olusebenzayo: cishe amamitha ayisikwele ayi-100, amakamelo amancane amathathu
Uma kungaphezu komlomo womlomo we-4, noma uhlala nabazali / nabasekhweni, udinga ukugcina izindlu zokugeza ezi-2. Uma kungahambisani nolayini wendawo yokugezela lapho kunabantu abaningi, indlu yokugezela ephindwe kabili isebenza kahle kakhulu. Futhi ngokuhlala nabadala, laba ababili abancane badinga nendawo eyimfihlo. Esimweni esinjalo, kungcono ukhethe indlu yokugezela kabili.
Gcina izindlu zangasese ezimbili. Ngokuyinhloko kunendawo yokugezela egumbini lokulala eliyinhloko kanye nasendlini yokugezela esikhaleni esivamile. Lokhu kungahlangabezana nezidingo zabasebenzisi abaningi futhi kuhlangane nezidingo ezahlukahlukene zokusebenza.
Idizayini yokugezela enkulu
Ink Ishinki + yangasese + kubhavu
Uma kungekho zindlu zokugezela ezinkulu, lo mklamo wonga isikhala futhi usebenza. Akukho ukwahlukana okumanzi nokomile endlini yokugezela okuyinhloko ukwenza ngcono ukusetshenziswa kwesikhala nokuhlangabezana nezidingo zokungena kwenkosikazi.
Ink Sink + toilet + shawa
Uma indlu yokugezela enkulu incane noma asikho isidingo sebhavu, kungafakwa ishawa ejwayelekile. Kungcono ukufaka ishawa ngomnyango wengilazi noma ukwahlukanisa ukwehlukanisa okumanzi nokomile.
Igumbi lokugezela lesibili
▷ Hambisa usinki ngaphandle
Thuthukisa ukusebenza kahle kwendawo yokugezela, ukuze kungabi nolayini wokuwasha nokugeza ekuseni nakusihlwa.
Hlukanisa okumanzi nokomile ngaphakathi
Ukwehlukanisa okumanzi nokomile endlini yokugezela yesibili ngehlukaniso lengilazi kukwenza kuphephe futhi kube lula ukusebenzisa. Iphinde inciphise indawo yokuhlanza lapho uhlanza futhi uhlanza. Ingangeza amakamelo okugcina uma ingaphandle likhona.
Uma kungakulungele ukuhambisa usinki ngaphandle, ungafaka ishawa endlini yangasese yesibili. Uma indlu inesikwele, ungabeka igumbi lokugeza ngasekhoneni. Beka usinki nendlu yangasese ohlangothini ngalunye.
▷ Indawo esebenzayo + igumbi lokuwasha
Ungafaka futhi isomisi sokuwasha endlini yangasese yesibili ukuthola ilondolo elula. Kodwa-ke, qaphela ukuthi ingaphakathi lendlu yokugezela kufanele lihlukaniswe kahle kumanzi futhi kome ukugwema amanzi emshinini, okuzothinta impilo yawo.
▷ handrails Living
Imindeni ehlala nabantu abadala, khumbula ukufaka izibambo ezihambayo ngenhla kwendlu yangasese endlini yangasese evame ukusetshenziswa ngabantu abadala ukuqinisekisa ukuphepha.
Izidingo zosayizi wendlu yangasese
Njengendawo yokusebenzisa imvamisa ephezulu, indlu yokugezela kumele ibe nosayizi ofanele. Ngizobhala osayizi abavamile bezindlu zangasese. Singahlela futhi sihlele kusengaphambili lapho sihlobisa.
1, ukuphakama komcengezi owodwa kungama-60-120cm, ukuphakama komcengezi ophindwe kabili kungu-120-170cm.
2, ukuphakama kwesitsha se-countertop ngokuyisisekelo kungama-80-85cm, kanti ukuphakama kwengxenye ephezulu yekhabethe lesibuko kungu-185-200cm. ngasikhathi sinye, futhi ungagcina isokhethi cishe ku-40cm kuthebulethi, engahlala nje ngaphakathi kwekhabethe lesibuko.
3, amapayipi amanzi ashisayo nabandayo ahlelwe ngo-40cm ukuphakama. I-downspout ingakhiwa kumugqa odongeni ophakeme wama-40cm ukuthuthukisa inani lobuso.
4. Uma kuneminye imishini emincane edingekayo, isokhethi lingagcinwa ngaphansi komcengezi.
I-countertop yokugezela ayinayo inani elikhulu lezidingo zansuku zonke ezithatha isikhala. Ukubukeka okuhlelekile nokuhlelekile kwenza abantu bazizwe bekhululekile.
Edlule :: Ubani Othi Izindlu Zokugeza Ezincane Azinakuba Ephakeme? Izindlela eziyi-11 Zokwenza Bakhulu Futhi Zihle Kakhulu Olandelayo: Ukufaka Amakhabethe Wendlu Yangasese Ngale ndlela Kuthathwa Njengokwekilasi. Thuthukisa ukunambitha ukuze uthole amamaki agcwele!